Reunion Island NRL viaduct: Dia izao ny dia an-dàlana!
Home » Vaovao momba ny fitaterana » Reunion Island NRL viaduct: Dia izao ny dia an-dàlana!
“Ny NRL 974 vaovao - ny làlambe Didier Robert izay noresahina nanerana ny nosy - dia làlana azo antoka tsy ho atahorana hianjera amin'ny vato… asa efa ho 1500… fanavaozana… faharanitan-tsaina… faharetana sy fanajana hitandro ny tontolo iainan'ilay nosy, », Hoy ny fanamarihana avy amin'ny media sosialy momba ity tetik'asa goavana eto La Réunion ity.
Ny asan'ny "Nouvelle Route du Littoral" (ny lalana amoron-dranomasina vaovao) dia efa manakaiky ny faran'ny avaratra. Ireo mpitondra moto mandehandeha manamorona ny arabe amoron-dranomasina dia mijery isan'andro ny fivoaran'ny asan'ny fametrahana ireo tsangambato lehibe ao anaty ranomasina.
Ity zoma ity dia manamarika ny ora farany nanetsehana ny masinina lehibe "Zourite", ampiasaina mandritra ny roa taona amin'ny fametrahana ireo tsato-kazo goavambe ao amin'ny fanambanin'ny ranomasina sy ireo ampahany voalohany amin'ny tokotanin-tsambo mivondrona tsikelikely. Hatramin'ny nanombohan'ny asa tany an-dranomasina dia nahatratra ny asa fanamboarana ny milina amin'ny taha amin'ireo poste lehibe roa isam-bolana ireo. Ny haavon'ny haavon'ireo lahatsoratra ireo dia miovaova hatramin'ny 24 ka hatramin'ny 38 metatra amin'ny lalana manontolo any an-dranomasina. Ny fototr'ireo paositra dia eo anelanelan'ny 12 sy 15 metatra ambanin'ny haabon'ny ranomasina, na eo anelanelan'ny 3 sy 8 m ambanin'ny fanambon'ny ranomasina.
Lahatsoratra 48 amin'ny fitambarany
Ny fivezivezin'ny zotra, izay ny lanjan'ny singa dia mety hahatratra 670 taonina ary ampitain'ny "mpandefa" hovoronina. Mikasika ny zotra amin'ny tohana dia mavesatra kokoa izy ireo, milanja hatramin'ny 2400 taonina ary ampandehanana ary apetrak'i Zourite eo an-toerana. Ny haavon'ny fizarana izay ho entina dia miovaova amin'ny 3.80 ka hatramin'ny 7.30 metatra.
Zourite dia nahavita tamin'ity volana martsa 2019 ity ny fametrahana ny poste farany amin'ny viaduct izay misy 48 eo anelanelan'ny sambo Lehibe sy ny fandrosoana any an-dranomasina ao Saint-Denis.
Ny tatitra momba ny fandrosoana dia vita amin'izao fotoana izao eny an-toerana ataon'ny solontena avy amin'ny tompon'andraikitra isam-paritra. Raha jerena ny fivoaran'ny asa dia nanontaniana ny filohan'ny faritra ihany koa ny amin'ny vina azo amin'ny zava-bita hafa izay hanaraka ny asan'ny NRL, manomboka amin'ny tambajotram-pitaterana isam-paritany. "Ny dingana voalohany amin'ny 12 km dia misy an'i Saint-Denis sy Sainte-Marie, miampy dingana 2: ny voalohany mankany Saint-Benoît, ary ny faharoa mankany andrefana satria fantatrao fa manome lalana ny New Coastal Road hahafahana mandray tambajotram-pitaterana tarihin'ny faritra ”, hoy i Didier Robert.
NEO aorian'ny NRL
Mikasika ny fandefasana tanteraka ny NRL, ny filohan'ny Faritra dia niresaka momba ny fandaharam-potoana noraisina hatramin'izao. "Eo amin'ny fomba fijery 2022 izahay amin'ny famoahana ankapobeny ny tetikasa," hoy izy, ary koa mamaly ny fanontaniana ny amin'ny mety hisian'ny fizarana ampahany. "Anisan'ny singa iray amin'ny fandinihana izany saingy tsy mampifandray ny fomba fiasa eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika ankehitriny satria asa 12 km manerantany izany, ka ny tanjona dia ny hampita ity tetikasa ity amin'ny ankapobeny."
Voaresaka ihany koa ny lohahevitry ny NEO Saint-Denis. "Nandritra izay roa na telo taona lasa izay, dia nifidy ny hiara-mitantana amin'ny City of Saint-Denis ho an'ny Nouvelle Entrée Ouest izahay, ary miara-miasa izahay mba hahazoana antoka fa misy ny fanitarana ary i Saint-Denis dia afaka mahazo tombony amin'ny fanoloran-tena isam-paritra miaraka amin'ny haavon'ny fifamoivoizana izay azo ekena kokoa. Hovitaina amin'ny fotoana voalohany io tetezana vaovao amin'ny Reniranon'i Saint-Denis amin'ny 2020-2021 io, ka amin'ny fotoana famaranana ny viaduct "izay maneho ny" endrika vaovao an'ny Barachois "amin'ny fanindroany," hoy i ny filohan'i Reunion.
Ashanti, Keyshia Cole, Ja Rule ho lohateny lehibe amin'ny Fetibe St. Maarten 2019
Mbola mila traikefa nahafinaritra ny mpandeha antitra